Kuziva Siderodromophobia | Save A Train
musha > Rovedza Kufamba Matipi > Kuziva Siderodromophobia
Vatariri vanogona kuva kuchirapa vamwe; nepo izvo zvakafanana zvinogona kutungamira kune akawanda maphobia kune vamwe. People who like traveling will probably even looking at their chitima chigaro Réservation nokuti kufamba uye nechokwadi kuti vanofamba.
Vazhinji Vafambi tsvaka paIndaneti nokuda kwavo chitima chigaro Réservation; apo vamwe vanosarudza uchingoita aibuda uye vachava zvavo chitima chigaro Réservation sezvakaita uye kana zvichidiwa zvichienderana yavari kuenda inotevera. Panewo phobias chokuita nezvitima kuti vamwe vanhu vanotambura. Kutya nezvitima rinozivikanwa Siderodromophobia. Siderodromophobia chinhu yakakura chaizvo izwi anofukidza zvose kutya kana phobias chokuita nezvitima. The chikuru mhando yevanhu kuti phobia ichi vainyanya anofukidza kutyiwa kuti vanhu vane ndichipfeka yakadonha kana kwete kuva kudzora. Other pane izvi, pane dzimwe kutya kuti kuti akaparirwa apo vanhu vari chitima. Pachava kutya kuti utachiona phobia, munzanga phobia kana kunyange claustrophobia.
Siderodromophobia kunobva zhinji phobias siyana. Uyezve, zvichienderana sei yakanyanya mamiriro iri. Pangava zviratidzo zvakafanana mwoyo palpitations, iratidzike seiri kubuda, shaking or gastrointestinal symptoms. For vamwe vanhu, mamiriro ezvinhu Ungatanga kunyange refu asati chitima rwendo rinotanga. kazhinji ichi paine zvatinoziva sezvo netarisiro kufunganya. Netarisiro kufunganya kunogona kukonzera matambudziko kupfuura phobia chaiyo pacharo. Vazhinji nguva zvinokonzera kuti kutya zvine chokuita zvakaipa zvakaitika kuti munhu anenge atarisana, iro kumwe ukama nezvitima. Pane kudiwa kunzwisisa pano kuti zvakaipa ruzivo kuti kwakabatana pfungwa dzako hazvirevi kuva chinhu chaitika kwauri. Zvingavawo chinhu kuti aigona chakaitika mumwe munhu kana chinhu kuti taikwanisa zvatakaona yakatipoteredza mukuzarurirwa munhu kana vezvenhau.
Panopera zuva, hazvina kukosha kuti kutya aripo; Chinhu chinokosha chete ndiko sei iwe kukurira kutya uye toedza kubvisa kutya kuti akaita nzvimbo muupenyu hwako. Vose phobias, Siderodromophobia kana chitima phobia zvikuru nyore nemishonga uye akaratidza kwazvo kubudirira prices, kana zvakaipa. Kubvisa pamusoro phobia, matanho anofanira kutorwa kana chokutanga kushanda ndichipfeka kubvisa usafunga kusvikira nezvitima vane hanya. wo, munhu ane phobia vanofanira kushanda pakuchinja ake nemaitiro nechokuita nezvitima. Panopera zuva rayo chinhu Zvinokosha zvakaisvonaka uye kunogona wakaiswa kuburikidza zvakakodzera uye kurapwa.
Leave your fear behind and Order Anorovedza matikiti kubva Save A Train
Unoda embed yedu Blog pambiru zviende yako nzvimbo, unogona kana kutora mapikicha edu uye rugwaro uye chete tipei chikwereti ane Link kuti ichi Blog romukova, kana iwe tinya pano: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fknowing-siderodromophobia%2F%3Flang%3Dsn - (Mupumburu pasi kuona Embed Code)
#siderodromophobia nezvitima chitima kufamba Mazano travelfear